Ukubalwa imisele noma ube nemigodi ngemigodi
umdwebo ngezinga 1: 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ubude emseleni L
Cacisa value yokugujwa
Ukumba (1 imitha cubic)
Ukususwa inhlabathi (1 imitha cubic)
L - ubude ingqikithi imisele noma ube nemigodi ngemigodi
A - ububanzi phezulu
B - ububanzi phansi
H - emseleni ukujula
Uhlelo ubheka ivolumu kanye surface area of emseleni.
Uma ububanzi phezulu kanye phansi emseleni ihlukile, kuyoba eminye ivolumu wusizo ibalwa C futhi umthamo nemithambeka D.
Ukuze ukwakhiwa yezokuxhumana, ashisayo, amapayipi noma ukufakwa strip isisekelo endaweni yakho kungase kudingeke ukuba amba umsele. Ungakwazi umeme ochwepheshe for lokhu, kodwa ungenza umsebenzi ngokwakho. Kodwa eqinisweni, kuzo zombili izimo kuyodingeka ukuba bazi ezinye izici emseleni. Bala kubo kuyosisiza Uhlelo lwethu. Ngokusekelwe ubude, ububanzi kanye emseleni ukujula, kuyoba ukuhlonza volume and ubuso bayo ndawo. Kuleso simo, uma ububanzi phezulu kanye phansi emseleni awafani, liphinde ezicatshangelwe futhi umthamo ewusizo nemithambeka. Ukubalwa emseleni kuzokusiza nje kuphela ukuba lula umsebenzi wabo, kodwa futhi abale izindleko ezweni imisebenzi, uma unquma ukusebenzisa amasevisi we ongoti.
Kunezindlela ezintathu trenching. Lokhu trenching ngesandla ngokusebenzisa igeja isandla kanye trencher.
Icala lokuqala ngokuvamile baphendukela khona, lapho kungekho ukufinyelela imishini ekhethekile. Lena indlela kwetfulwe isikhathi of trenching, othinta kakhulu izinga inhlabathi.
Hand trenchers ukunciphisa isikhathi msebenzi. It angathengwa noma aqashiwe. Ungase futhi oda the Ukumbiwa imisele in a ngokuqinile ezikhethekile. Khona-ke ngeke enze professional.
The excavator isetshenziswa lapho endaweni kungaba ukugibela imishini yokwakha, kanye lapho kukhona semali yomsebenzi. Ngaphambi liqashe excavator kufanele anqume ububanzi phansi emseleni pick up the car with ubukhulu ibhakede, okuhambelana kuso.
Uma unquma ukuba amba umsele bebodwa, into yokuqala kufanele wazi ukuthi izinhlobo ezahlukene imisebenzi okudingeka emseleni Ekujuleni. Ngokwesibonelo, laying izintambo, ngokuvamile amba umsele ka-70 cm ukujula. Futhi indle kudinga okungaphezu imisele ejulile. Kuyinto efiselekayo ukuthi of a imitha isigamu ukujula, lokhu lalilikhulu kune inhlabathi okokuqandisa ukujula.
On the ububanzi emseleni sithinta uhlobo lomsebenzi wezisebenzi. The width owesincane emseleni kukalwa esinqeni kufanele ifanelane nohlobo kanye nosayizi amapayipi embondelene kuwo.
HomeUbukhulu yokhuniUphahla GableAbat-ukuzwakalisaUphahla MansardHop ophahleniWood trussezitebhisini Straight entsanjeniizitebhisi Direct SaddleIzitebhisi nge ° 90Izitebhisi nge swivel 90 °, futhi izinyatheloIzitebhisi ukuvula 180 °Isikhwelo liphenduka by ° 180 kanye nezigaba rotaryIsikhwelo kanye besandla ezintathuIsikhwelo kanye besandla amathathu kanye nezigaba rotaryEzitebhisini CircularMetal izitebhisiMetal ezitebhisini nge amazombe bowstringMetal izitebhisi nge ° 90Metal izitebhisi nge ° 90 futhi amazombe bowstringMetal izitebhisi ngokujika of 180 °Metal izitebhisi liphenduka by 180° and bowstring amazombeIzinyathelo ConcreteStrip isisekeloPier isisekeloBase setsheIzindandatho ConcretePaversIndawo eyimpumputheThe ekubalweni diagonalUkwakheka ngokhonkoloLumberNokufakwaTile CeramicOkwakhiwa ngalo la mabhodiWallpapersUkukhweza ishidi izintometal grillesIzindlu WoodenWall MaterialsFloor MaterialsdeckingStone FenceMetal ezicijileArch for picket kocingoIphansi wathelaCanopiesUsayizi LotPitumthamo kahleDitchTurfThe pool aboncamanepipe ivolumuUmqulu ethanginiUmgqomo ivolumuUmqulu we esitsheni wamaqhuqhuvaInani isihlabathi noma isihlabathi kwenqwabaUkubalwa kwevolumu yomoya ekuholeni komoya umoyaCalculating water temperatureGreenhouseGreenhouse ongaphambili omiseBuilding ngocingoUkukhanyisa ekamelweniWardrobeTrapeze cut anglesSegment archal culationIfenisha i-crosshair engeliwokubala loan